Ela ny ela fa nirava ihany!
2007-09-13 @ 16:41 in Politika
Androany araka ny vaovao no vita ny fiofanan’ny sefo fokontany rehetra manerana an’I Madagasikara. Androany manko no natao ny lanonam-pamaran’ny andiany fahaenina farany natao tao Iavoloha. Izany hoe raha mahadinika ianareo dia rahampitso vao mety ho malalaka amin’izay ny trano fianarana fatorian’izy ireo. Ny mpianatra manko niditra nianatra tamin’ny alatsinainy na talata teo. Ny sefo fokontany kosa mbola mila ny sekoly amin’ny alina. Izany hoe tsy maintsy misy efitra tsy afaka ianarana izany any an-tsekoly raha tsy ny sekoly mihitsy no mikatona ho an’ny mpianatra aloha. Soa ihany fa fotoana fohy fa raha tsy izany dia mampahatsiaro indray ny fotoana nibahanan’ny tra-boina ny sekoly rehefa tonga ny tondra-drano.
Sarotra moa ny hitsikera mivantana fa na dia izany aza dia mba misy fanadinoana amin’ny fandaminana ny fandaharam-potoana ihany izao fifanindrian’ny fotoana izao. Nihevitra ihany aho fa tafiditra ao anatin’ny fampianarana ny sefo fokotany ny fandaminam-potoana saingy maneho tsy fahamatorana ihany izao tranga hita izao.
Manaraka izany indray dia ankalazaina hatrany hatrany fa tsy azo atao ny manao fampielazan-kevitra amin’ny tranom-panjakana na sekoly na fiangonana na eny an-tsena fa nahita afisy nahatona teo amin’ny vavahadin’ny tsena ambohijatovo aho ry zareo a! Nahantona, hoy aho, satria apetaka amina baoritra iray io ary dia farango no mitazona azy hatreny ambony. Izany hoe tsy mipetaka amin’ny rindrina izy fa mikirazorazo eo am-bavahady. Hevitra iray tsy mandika lalàna ve ary izy io? Mazava loatra fa tsy maintsy avy amin’ny antoko matanjaka indrindra ilay hevitra e!